ကလေးငယ်အာဟာရ - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ6အနက်မှ 1
ကလေးများ မွေးပြီး ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားလာဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရလိုပါတယ်။ မိဘများ သိထားသင့်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ဒီမှာဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
အရင်က ဘေဘီလေးတွေက ဆလတ်ရွက် စားလို့ရတယ် မရဘူးဆိုတာကို သိပ်အရေးစိုက်စရာ မလိုဘဲ အခုနောက်ပိုင်း ဘေဘီလေးတွေက ဆူရှီတွေ ရေဘဝဲလုံးကြော်လို စားစရာမျိုးတွေကို စားတတ်လာချိန်မှာတော့ ဘေဘီလေးကို ဆလတ်ရွက် ကျွေးလို့ရလားဆိုတာက မေမေတိုင်း သိချင်မယ့် မေးခွန်းလေး တစ်ခု ဖြစ်တာပြီ ထင်ပါတယ်။ ဆလတ်ရွက်က ဘာဂါ၊ ထမင်းလိပ်တွေ ထဲမှာ အများဆုံးပါတတ်ပြီး ဘေဘီလေးတွေ အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ မရောနိစ်လေးနဲ့ တို့စားရင် အတော်လေး စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးနဲ့ ဆလတ်ရွက်က တည့်လား.... ဘေဘီလေးက ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် ဆလတ်ရွက် စားလို့ ရမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဆလတ်ရွက် ဆိုတာ ဆလတ်ရွက်ဆိုတာ အရွက် အနားတွန့်ဖားဖားလေးနဲ့ အစိမ်းနုရောင် အရွက်လေးပါ။ ရိုးတံလေးက ဖြူုဖြူကြွပ်ကြွပ်လေးပါ။ စားရင် နည်းနည်းလေး ခါးသက်သက်ဖြစ်ပေမယ့် မယောနိစ်လေးနဲ့ […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 22/02/2022
ကလေးငယ်အာဟာရ နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ဘေဘီလေးက သံပရာသီး စားလို့ရလား .........
သံပရာသီး က ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိထားပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပေမယ့် အရသာက ခံတွင်းရှင်းစေပြီး လန်းဆန်းစေတာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ ဟင်းလျာတွေထဲ ထည့်စားသလို၊ အသားပြုတ်တွေကို အရသာတိုးစေဖို့လည်း သံပရာသီး ထည့်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သံပရာသီးကို အစားများတဲ့ ပုံစံကတော့ သံပရာရည် အေးအေးချိုချိုလေး သောက်တာပါ။ သံပရာရည် အေးအေးချိုချိုလေးက ခေါင်းကြည်စေသလို ခံတွင်းရှင်းစေပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သံပုရာရည် သောက်နေတုန်း Juice လား တီတီ ..... သားသားလည်း သောက်မယ်ဆိုလို့ ချဉ်တယ် မသောက်ရဘူးပဲ ပြောရမလား ..... နည်းနည်းလောက်ပဲ တိုက်လိုက်ရမလားဆိုပြီး ဝေခွဲရခက်နေတဲ့ တီတီ၊ လေးလေးတို့အတွက် ဘေဘီလေးက သံပရာရည် သောက်လို့ရလား .... သံပရာသီးရော စားလို့ ရလားဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ဘေဘီလေးက သံပရာသီး စားလို့ရလား […]
ဘေဘီလေးက ကင်းမွန် စားလို့ ရလား .......
ဘေဘီလေး အသက် ၆ လပြည့်လို့ solid food စစားလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းထဲကို ကင်းမွန် ကိုများ ထည့်ထားမိသေးလား မေမေတို့ရေ ..... ဒါဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရမှာ တစ်ချက်က ဘေဘီလေးက အစာမာ စစားချိန်မှာ ကင်းမွန် စားလို့ရမလား .... တည့်ရောတည့်ရဲ့လား ဆိုတာပါ။ ဒီ မေးခွန်းလေးတွေအတွက် အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ ဘေဘီလေးက ကင်းမွန် စားလို့ရလား..... ဘေဘီလေးက ကင်းမွန်စားလို့ ရလားဆိုတော့ စားလို့ ရပါတယ်။ ကင်းမွန်က ရေနေသတ္တဝါ ဖြစ်ပြီး ဘေဘီလေးတွေ စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။ ဒါဆို ဘယ်အရွယ်မှာ ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန်စ ကျွေးရမလဲလို့ သိချင်နေပြီဟုတ်။ ဘေဘီလေး အသက် ၆ လပြည့်ပြီး အစာမာတွေကို စားတတ်ချိန်မှာ စပြီး ကျွေးလို့ရပြီဆိုပေမယ့် […]
ဘေဘီလေး ကို အသက် ၆ လမပြည့်ခင် ( solid food ) စတင် မိတ်ဆက်လို့ မရခင်ကတည်းက ကျွေးချင်နေတာတွေက ခပ်များများရယ် ဟုတ် မေမေတို့ ဘွားဘွားတို့ရေ ..... စားကောင်းတာလေး တစ်ခုခု စားလိုက်တိုင်း ဘေဘီလေးများ စားချင်မလား ..... ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က အမြဲလိုလို ဖြစ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်လေးက ဘေဘီလေးကို ချစ်တဲ့ ဘွားဘွား၊ မေမေ၊ တီတီတိုင်းမှာ ဖြစ်မိတဲ့ ဆန္ဒပါ။ ဒီတစ်ခေါက်လည်း ပုစွန် ကင်စားမယ်။ ပုစွန် နဲ့ နာနတ်သီးလေးပါတဲ့ ပီဇာလေး စားရင်း ဘေဘီလေးများ စားချင်မလားလို့ တွေးမိနေနိုင်တဲ့ ဘွားဘွား၊ မေမေ၊ တီတီတို့ သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေးအတွက် ဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ […]
ဘေဘီလေးက ၆ လအထိ မေမေ့နို့ တစ်မျိုးတည်းကို သောက်သုံးတယ်ဆိုပေမယ့် ၆ လ ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အာဟာရ လိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေဖို့ solid food စကျွေးရပါမယ်။ ဒီလိုကျွေးတဲ့အခါ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်၊ ဂျုံ၊ ဆန် စတာတွေကို ညီညွတ်မျှတစွာ ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလိုဆိုတာနဲ့ ဘေဘီလေးကို လူကြီးတွေ စားသလို ကျွေးဖို့က အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးနဲ့လည်း သင့်တော်ပြီး အာဟာရလည်း ပြည့်ဝစေဖို့ ဘယ်လို အသီးအနှံလေးတွေ ကို စကျွေးရမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ဘေဘီလေးအတွက် ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးရမယ့် အသီးအနှံလေးတွေက ဘာတွေများလဲ ....... ဘေဘီလေးက အသက် ၆ လ ပြည့်လို့ solid food ကို […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 22/10/2021
ဘေဘီလေးက ဩဇာသီး စားလို့ရလား …….
သီတင်းကျွတ်ခါနီးပြီဆိုရင် ဩဇာသီး တွေက လှိုင်လှိုင်ပေါပါပြီ။ ဒီလို အချိန်မှ စားရတဲ့ ဩဇာသီးလေးကို ကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားမိချိန်မှာ တွေးမိနိုင်တာက ဘေဘီလေးရော စားလို့ရလား ဆိုတာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲ့အတွေးလေးအတွက် အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်။ ဩဇာသီးမှာ ဘာအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ …….. ချိုချိုလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ဩဇာသီးလေးမှာ ဘေဘီလေးတို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အခုလို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်လိုရီ အဆီ ပရိုတင်း ဗီတာမင် C ဗီတာမင် B အုပ်စု သံဓာတ် ဖော့စဖရိတ် ဆိုဒီယမ် ကယ်လ်ဆီယမ် ပိုတက်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ် သီရာမင်း ဗီတာမင် A ရေဓာတ် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ဩဇာသီး ကျွေးလို့ရလား ……. ဘေဘီလေးက အသက် ၆ လပြည့်ပြီဆိုရင် အသီးတော်တော်များများကို […]
ရေခဲ က နာကျင်မှု တော်တော်လေး သက်သာစေနိုင်တဲ့အရာပါ။ ကြွက်သားတွေ နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင်သလို သွားနာတာနဲ့ သွားဖုံးရောင်တာတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးက သွားပေါက်ချိန်မှာ သွားဖုံးနာတာကို သက်သာစေဖို့ ရေခဲပေးကိုက်ထားတာက နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်လို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒီယူဆချက်က တကယ်ပဲ မှန်လား။ ဘေဘီလေးက ရေခဲစားလို့ရလား ဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးက ရေခဲ စားလို့ရလား....... ရေခဲက နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပေမယ့် ဘေဘီလေး သွားပေါက်ခါနီး သွားဖုံးနာတာကို သက်သာစေဖို့အတွက်တော့ ရေခဲပေးကိုက်တာက နည်းလမ်းကောင်း မဟုတ်သလို ပူပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာ ဘေဘီလေးကို အပူသက်သာအောင်ဆိုပြီး ရေခဲကျွေးတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေဘီလေးကို ရေခဲမကျွေးပါနဲ့လို့ ဆိုရတာက ဘေဘီလေးကို ရေခဲကျွေးတာက မတူညီတဲ့ ခံစားချက်ကို ရစေသလို အာရုံသိမှုတွေကို ပိုမို သိရှိစေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အခုလို ဆိုးကျိုးလေးတွေ […]
ရေခဲမုန့် ဆိုတာက ကလေးရော လူကြီးတွေပါ ကြိုက်တဲ့ အစားအစာပါ။ ချိုချိုလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်လေး ရောထားပြီး စားလိုက်ရင် မွမွလေးနဲ့ အေးနေတဲ့ ရေခဲမုန့်က ဘေဘီလေးတွေ ပိုကြိုက်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါ။ ဒီလို တွေးမိတာနဲ့အတူ ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတာက ဒီလို စားကောင်းတဲ့ ရေခဲမုန့်လေးကို ဘေဘီလေးကို ကျွေးလို့ ရမလား ဆိုတာပါ။ ဒီ မေးခွန်းလေးရဲ့ အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးထားတာမို့ သေချာလေး ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ရေခဲမုန့် ကျွေးမလို့လား...... ဘေဘီလေးကို အသက် ၆ လပြည့်တဲ့အခါ မေမေ့နို့ အပြင် solid foods တော်တော်များများကို မိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဘေဘီလေးက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိမှာပါ။ ဒီလို စပြီး မိတ်ဆက်တဲ့အခါ အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ […]